Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson oo fariin u diray kooxaha kasoo horjeeda Reds xilli ciyaareedka soo socda – Gool FM
(England) 25 Juunyo 2019. Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ayaa ka hadlay riyada iyo goolasha ee kooxdiisa xilli ciyaareedka soo socda, isagoo sheegay in dhamaan saaxiibadiis ay diyaar u yihiin tartamada soo socda.
Xili ciyaareedkii hore Liverpool ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed fiican, waxayna dadaalkii ay bixiyeen ugu guuleysteen tartanka Champions League, halka horyaalka Premier League ay kaga dhameysteen kaalinta 2-aad.
Hadaba Kabtanka kooxda Liverpool Jordan Henderson ayaa farriin digniin ah u diray dhamaan kooxaha ka soo horjeeda Reds xilli ciyaareedka soo socda, isagoo sheegay in ku guuleysigooda Champions League ee xili ciyaareedkii tagay uu ahaa bilow oo kaliya.
“Waxaan dhamaanteen sugeynaa xilli ciyaareedka soo socda, waxaan dooneynaa inaan kaga bilaabano si fiican, isla markaana aan u dagaalano dhamaan tartamada kala duwan”.
“Inaan kaga guuleysano Champions League kooxda Tottenham dhamaadka xili ciyaareedkii tagay, waxay ahayd dadaal aan bixinay, waxaan qaadanay xili ciyaareed aad u adag oo sidoo kale lahaa dareen”.
“Waa sharaf aad iyo aad u weyn aniga ahaan inaan noqdo hogaamiyaha kooxdan Liverpool, xiliga aan ku hor qaadayay koobka saaxiibadey, waxay ahayd waxa ugu fiicnaa ee xirfadeyda kubadda cagta”.